Phone Cooler - Pro Cleaner Master App - CPU Cooler APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဖုန်းနံပါတ် Cooler - Pro ကို Cleaner မာစတာ App ကို - CPU ကို Cooler
ဖုန်းနံပါတ် Cooler - Pro ကို Cleaner မာစတာ App ကို - CPU ကို Cooler APK ကို
ဖုန်းနံပါတ် Cooler - Pro ကို Cleaner မာစတာ App ကို - CPU ကို Cooler အပူချိန်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည်နှင့်ကို detect နှင့် CPU အသုံးပြုမှုနှင့်အနိမ့်ဖုန်းကိုအပူချိန်လျှော့ချဖို့ apps များစားသုံးမိုးသည်းထန်စွာအရင်းအမြစ်ပိတ်သော app ကိုထိန်းချုပ်။ စိတ်လျော့သည်
ဖုန်းနံပါတ် Cooler - Pro ကို Cleaner မာစတာ App ကို - CPU ကို Cooler features တွေ:
သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအပူချိန်ကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်စောင့်ကြည့်, ဒါကြောင့်သင်ယခုအချိန်တွင်မှယခုအချိန်တွင်ထံမှပြောင်းလဲမှုမြင်နိုင်ပါသည်။ အပူချိန်များလွန်းမြင့်မားသည်အခါ, ဖုန်း Cooler Master - CPU ကို Cooler - Apps ကပငျသညျသတိပေးပါလိမ့်မယ် Cool ။
သည် dynamically CPU အသုံးပြုမှုကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး, နှင့်ဖုန်းအပူများအတွက်အကြောင်းမရှိဆုံးဖြတ်ရန်စနစ်ကသယံဇာတ overusing ဖြစ်ကြောင်း app များကိုစုံစမ်းသိရှိလာပါတယ်။ အေးမြ app ကို
အနီးကပ် CPU အသုံးပြုမှုလျှော့ချရန်တဦးတည်းရိုးရှင်းတဲ့ကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူ apps များအပူလွန်ကဲ။
အပူချိန်မြင့်တက်စေဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်း apps များပိတ်, တဖန်မြင့်တက်ကနေဖုန်းကိုအပူချိန်ကာကွယ်ပေးသည်။
ဤအရာအလုံးစုံကြောက်မက်ဘွယ် features တွေနှင့်အတူ, ဖုန်း Cooler Master - CPU ကို Cooler - Apps ကပ Cool မြင့်မားတဲ့ CPU အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ apps များ detect နှင့်သင့် device ကိုအေးမြစေခြင်းငှါသူတို့ပိတ်လိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်, ဖုန်း Cooler Master လည်းစင်ကြယ်သောအားဖြင့် RAM ကိုသင့်ရဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးချဲ့နှင့်သင့်ဖုန်းကိုမြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးသည်။
အဘယ်ကြောင့်ငါ့ဖုန်း overheat သနည်း?
အပူအစွမ်းထက် apps ဒါမှမဟုတ်ဂိမ်းအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုအပြီး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ပြိုင်နက် apps များအရေအတွက်များတဲ့အပြေးနေချိန်မှာဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဖုန်းရဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲပါဝါစားသုံးမှုမြင့်တက်လာတဲ့အခါသင်သိသိသာသာအပူလွန်ကဲဖုန်းကိုခံစားရလိမ့်မည်ဟုလုံလောက်စွာအပူထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အေးချမ်းသော
အလွန်မြင့်မားဖုန်းကအပူချိန်သင့်ရဲ့ device ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတုံ့ပြန်ရန်သို့မဟုတ် crash သို့မဟုတ်ပြန်လည်စတင်ရန်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအပူသင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့သက်တမ်းတို, device ကိုအလိုလိုအိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်ပါ။ ပိုများသောအလေးအနက်ထားသျောအပူ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအလားအလာလုံခြုံရေးပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်ဆက်ပြောသည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏အန်းဒရွိုက်ဘက်ထရီအေးမြ app ကိုချစ်ကြလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လောက်ရှိသလဲကျေးဇူးပြုပြီး5*!
ဖုန်းနံပါတ် Cooler - Pro ကို Cleaner မာစတာ App ကို - CPU ကို Cooler
3.78 ကို MB